Ubungakanani bemarike yeQingdao carbomer bukhulu. Kufunyenwe ukuba kule minyaka mihlanu izayo, kuyakubakho intengiso ye-yuan ye-10.34 yezigidigidi eza kuphuhliswa ngo-2025. Okulandelayo, masilandele izinto ezintsha zeQingdao yinuoxin
I-Carbomer yi-homopolymer ye-acrylic acid, enqamlezayo okanye yokuhlangana kunye nayo nayiphi na i-polyols allyl ethers. Eli khompawundi lihlala lingumgubo omhlophe, lisetyenziswe njenge-arhente yokuqina kunye nokuzinzisa kwe-emulsion. Idume ngokusetyenziswa kwayo kumzi-mveliso wezimonyo kwaye inesicelo esisebenzayo kwicandelo lezonyango nakwimpilo. Iiarhente ezininzi zikholelwa ekubeni zonke iintlobo zeekhemikhali zisempilweni kakhulu, nangona ezinye zezinto ezisetyenziselwa ukunciphisa i-pH yazo zinokuba yingxaki.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, intengiso yehlabathi ye-carbom ikhule ngokukhawuleza, ngomndilili wokukhula ngonyaka we-11.98. Ingeniso kaKapom kwihlabathi liphela iphantse yayizigidi ezingama-736 zeedola zaseMelika, kwaye owona mthamo wokuthengisa umalunga neetoni ezingama-57600.
Ukwahlulahlula i-carbomer kubandakanya i-carbomer 940, carbom 980, kapom 934, njl, kunye nenani le-carbomer 940 ngo-2018 imalunga ne-37.
I-Carbomer isetyenziswa ngokubanzi kumachiza amayeza, ukhathalelo lomntu kunye nezithambiso. ICarbomer isetyenziselwa ukhathalelo lobuqu kunye nezithambiso, malunga neepesenti ezingama-54.
Ummandla weAsia Pacific lilizwe labathengi elinesabelo sentengiso phantse sama-55.4. Ukongeza, iNyakatho Melika neYurophu zinamanani afanayo, abalwa nge-14.3 kunye ne-17.8 ngokwahlukeneyo kwintengiso yabathengi
Uphuhliso olunokubakho kwimarike lukhulu. Ngaba ulibonile ithuba lokuthengisa i-carbom? Qingdao kapom abenzi engundoqo ukwamkela ukuba utyelele inkampani yethu uxoxe imiba intsebenziswano.